पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन, असार ३ गते बिहिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल – Classic Khabar
June 17, 2021 143
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल असार ३ गते बिहिबार इश्वी सन २०२१ जुन १७ तारीख जेठ शुक्लपक्ष सप्तमी तिथी पूर्वफागुनी नक्षत्र सिद्धि योग वणिज करण चन्द्रमां सिंह राशिमा आनन्दादि योगमा गद योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतु कुमार यात्रा विश्व खडेरी रोकथाम दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) बिश्वासिला ब्यत्तिहरुबाट धोकाहुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । सामाजिक कार्यमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । सामुहिक कार्यमा सहभागी हुने अबसर रहेकोछ । प्रतिश्पर्दीहरु सवल रहनाले कार्यसम्पादनमा बिषेश साबधान रहनु पर्ने समय रहेकोछ ।
Prevज्ञानेन्द्र शाहीले सार्वजनिक गरे गोप्य भिडियो, के थियो घटनाको बास्तबिकता ? (भिडियो सहित)
Nextतँ दलितको छोरी,छोराछोरी खोलामा फा’ल्दे भनेर विवाह भाको १० बर्ष पछी श्रीमान फरार श्रीमतीको रु’वाबासी
रुपा सुनारले आफ्नो मोबाइल अनु,सन्धानमा नदिनु को कारण के हो ? खुल्यो सब ग,म्भिर रहस्य,भिडियो हेरौ
वास्तवमा के हो यो घटना? भिडियोहरु किन धेरै भाइरल हुँदैछ ?